NAB ပြပွဲ 2015 | NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Show ကို 2015 NAB
အဆိုပါကဲ့သို့အပေါငျးတို့သနောက်ဆုံးပေါ်ဂီယာ (မြင်ချင် #Alexa mini ကို) မှာ #NABshow ဒီနှစ်? သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သေချာစေပါ #abelNAB တဲ C8008! t.co/B2RSlCgWJS
ယခင်: အကြောင်းအရာ Delivery ၏အနာဂတ်တွင်အာရုံစိုက်ဖို့ Show ကို NAB | NAB ပြရန်
နောက်တစ်ခု: မျက်လုံးနှင့်အသံပြဇာတ်ရုံများသည် Harman's Studer Vista X Digital Console ကိုထည့်သွင်းပေးသည်